Isbadal Degdeg ah: Sacuudiga Oo Boqor Cusub Yeelanaya Maalmo Gudahood – Goobjoog News
Warbixin ay daabacday CNBC ayaa lagu sheegay in uu jiro qoraal ay soo saareen Eurasia Group oo lagu ogaaday in dalka Sacuudiga uu boqor cusub yeelan doono tobobaadyada soo socda.
Qoraalka waxaa lagu sheegay in boqorka Sacuudiga Salmaan Bin Cabdi Casiis uu wiilkiisa Amiir Maxamed ku wareejin doono xilka maalmaha soo socda.
Amiir Maxamed Bin Salmaan oo haatan ah dhaxal-sugaha waxaa muddo loo diyaarinayey sidii uu xilka ula wareegi lahaa kadib markii aabihiisa Salmaan oo hadda boqor ah ay kadaba timid da’a iyo xanuunno ay ku jiraan xusuus la’aan.
Qoraalka la helay waxaa uu sidoo kale ka hadlayaa in Maxamed Bin Salmaan noqon doono Boqorka Sacuudiga sida ugu dhaqsaha badan, si looga fogaado khilaaf iyo loolan soo kala dhexgala qoyska Aala-Sacuud.
Ciyaarta Kama Dambeysta Degmooyinka Muqdisho Oo Caawa Ka Dhacaysa Garoonka Banaadir